Madaxweynaha Puntland oo shacabka ugu hambalyeeyey munaasabadda ciidul Fidriga. – Radio Daljir
Luulyo 5, 2016 1:15 g 0
(July 05 2016)-Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa caawa 05-July-2016 hambalyada ciidul fidriga u diray dhammaan muslimiinta caalamka gaar ahaan shacab-weynaha reer Puntland.
Waxaan sidoo kale Eebbe idiinka rajeynayaa in sannadkaan sannadkiisa kale aynu ku gaarno nabad gelyo, naxariisa, wadajir, horumar, midnimo iyo dawladnimo”ayuu yiri Madaxweyne Dr. Cabdiweli Maxamed Cali.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale Eebbe uga baryey guud ahaan ummadda Soomaaliyeed in ka aqbalo Soonkii ay Soomeen, intii dhimatayna uu ugu naxariisto fadliga Soonka awgii, sannakaan sannadkiisana uu ku gaadhsiiyo bash-bash iyo barwaaqo.
Warbaahinta Daljir oo shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeysay Munaasabadda Ciidul Fidriga.